အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့အနီး လေယာဉ်ငယ် ပျက်ကျမှုအတွင်း လူ ၈ ဦး သေဆုံး - Xinhua News Agency
အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့၌ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားသည့်နေရာ၌ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ရောမ ၊ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့ပြင်ရှိ အဆောက်အအုံတစ်လုံးထဲသို့ ပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ငယ်တစ်စင်းသည် အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် ပျက်ကျသွားပြီး လူ ၈ ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အီတလီနိုင်ငံ မီလန်မြို့၌ အောက်တိုဘာ ၃ ရက်တွင် လေယာဉ်ပျက်ကျမှု ဖြစ်ပွားသည့်နေရာ၌ မီးသတ်သမားများက မီးငြှိမ်းသတ်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
Pilatus PC-12 လေယာဉ်သည် ပြုပြင်မွမ်းမံလျက်ရှိသည့် နှစ်ထပ်အဆောက်အအုံထဲသို့ ပျက်ကျသွားပြီး လေယာဉ်မှူး နှင့် တွဲဘက်လေယာဉ်မှူး သေဆုံးကာ ကလေးငယ်အပါအဝင် ခရီးသည် ၆ ဦး သေဆုံးကြောင်း မီလန်မြို့စွန် San Donato Milanese ဒေသရှိ မီးသတ်ဌာနတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆင်ဟွာသို့ အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါပျက်ကျမှုသည် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ် ဖြစ်ကြောင်း San Donato မြို့တော်ဝန် Andrea Checchi က ပြောကြားခဲ့ပြီး သတင်းဖော်ပြချက်များအရ သေဆုံးသူများတွင် အီတလီလူမျိုး မပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းလေယာဉ်သည် အီတလီ Sardinia ကျွန်းဒေသ Olbia မြို့ရှိ လေဆိပ် နှင့် မီလန်မြို့ Linate လေဆိပ်အကြား ပျံသန်းပြေးဆွဲနေသည့် လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ လေယာဉ်မှူးသည် လေယာဉ်ပျံတက်ပြီးနောက် မကြာမီ အခက်အခဲရှိကြောင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု မီဒီယာတစ်ချို့တွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
မျက်မြင်တွေ့ရှိသူက လေယာဉ်ပျံသန်းနေစဉ်အတွင်း လေယာဉ်အပိုင်းအစတစ်ချို့ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး လေယာဉ်အင်ဂျင်သည် နိမ့်ဆင်းလာစဉ် မီးလောင်ကျွမ်းနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း မီဒီယာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
မီလန်မြို့ရှိ အစိုးရရှေ့နေ Tiziana Siciliano က ယင်းအဖြစ်အပျက်အတွက် မည်သူတွင် တာဝန်ရှိသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ဆောင်ရွက်သွားရန် ကတိပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရရှေ့နေ Tiziana Siciliano က လေယာဉ်များအား အပြည့်အစုံမှတ်တမ်းတင်ပေးသည့် ကိရိယာ black box အား သယ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ၊ black box သည် လေကြောင်းဘေးအန္တရာယ်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ပျက်ကျသွားခဲ့သည့် လေယာဉ် black box အား ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သတင်းမီဒီယာတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
ROME, Oct.3(Xinhua) — Eight people died Sunday whenasmall private airplane crashed intoabuilding outside Italy’s Milan.
According to news reports, Siciliano also revealed that the black box —aheavily-protected recording device airplanes are required to carry and that is oftenakey part of investigations into air disasters — had been safely recovered. Enditem
Photo 1 – Emergency staff members work on the site ofaplane crash in Milan, Italy, Oct. 3, 2021. At least six people died afterasmall plane crashed in San Donato of suburban Milan on Sunday, according to local sources. (Str/Xinhua)
Photo2– Firefighters work on the site ofaplane crash in Milan, Italy, Oct. 3, 2021. At least six people died afterasmall plane crashed in San Donato of suburban Milan on Sunday, according to local sources. (Str/Xinhua)
Photo3– Firefighters work on the site ofaplane crash in Milan, Italy, Oct. 3, 2021. At least six people died afterasmall plane crashed in San Donato of suburban Milan on Sunday, according to local sources. (Str/Xinhua)
Photo4– Firefighters work on the site ofaplane crash in Milan, Italy, Oct. 3, 2021. At least six people died afterasmall plane crashed in San Donato of suburban Milan on Sunday, according to local sources. (Str/Xinhua)
Photo5– Firefighters work on the site ofaplane crash in Milan, Italy, Oct. 3, 2021. At least six people died afterasmall plane crashed in San Donato of suburban Milan on Sunday, according to local sources. (Str/Xinhua)
Photo6– Firefighters work on the site ofaplane crash in Milan, Italy, Oct. 3, 2021. At least six people died afterasmall plane crashed in San Donato of suburban Milan on Sunday, according to local sources. (Str/Xinhua)
Photo7– Firefighters work on the site ofaplane crash in Milan, Italy, Oct. 3, 2021. At least six people died afterasmall plane crashed in San Donato of suburban Milan on Sunday, according to local sources. (Str/Xinhua)